Danjire Afey: Kenya dan gaar kuma wadato maamulka Juba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Danjire Afey: Kenya dan gaar kuma wadato maamulka Juba
19th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Wakiilka urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Maxamed Cabdi Afey, ayaa sheegay in Kenya aysan dano gaar ah ka laheyn dhismaha maamulka Jubba e iminka ka taliya Kismaayo iyo deegaano kale oo kooban.
Maxamed Cadi Afey ayaa xusay in sheegashadaas ay tahay mid aan sal laheyn, ayna ka dambeeyaan dad aan doonaynin nabad waarta oo ka dhalata Soomaaliya.
Dadka mucaardsan maamulka Juba ee Axmed Madoobe hogaamiyo ayaa rumeysan in maamulkaas yahay mid ay dhistay dowladda Kenya, islamarkaana ay ku fushato danaha ay ka leedahay Koonfurta Soomaaliya.
Maxamed Cabdi Afey oo wareysi siiyey wargeyska The Standard ee kazoo baxa Kenya ayaa sheegay in dhismaha maamulka Jubba uu ka mid yahay maamullada waafaqsan arrimaha federaalka ee ay dowladda Soomaaliya ka hirgelinayso gobollada dalka.
Danjiraha ayaa sheegay in dadka ku nool gobolladaas ay doonayaan in ay dhistaan maamul, isla markaana Urur goboleedka IGAD uu ku hambalyaynayo in dadku ay qaataan nabadda iyo in ay xoojiyaan maamulka.
Maxamed Cabdi Afey ayaa sidoo kale sheegay in IGAD, ay ka qeyb qaadatay in ay hubka ka dhigaan ciidankii uu watay Col.Barre Aadan Shire (Hiiraale), isla markaana ay ku qanciyaan in ay ka qeyb galaan shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka, si looga hortago in markale la daadiyo dhiigga shacabka aan waxba galabsan.
Wakiilka ayaa xusay in dhismaha maamulka Jubba, uu tusaale u noqon doono maamul loo dhiso gobollada kale ee loo soo jeediyay in ay samaystaan maamul ay ku midaysan yihiin.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa aaminsan in Kenya oo cadeysatay iney dooneyso boobka qeyb ka mid ah badda Soomaaliya ay sidoo kale dalka Soomaaliyaa ka leedahay dano badan.
Shacbaka Scotland oo codeeyey iney kasii mid ahaadaan UK
Madaxweynaha Uganda oo eryey R/wasaare siyaasad ahaan aad ugu dhawaa